Cunista cashada ee habeenkii milayyada dambe wax ay waxyeello u gaystaa caafimaadka wadnaha - Horn Future
Khubarada ayaa waxa ay talisay baahida loo qabo in la cuno cashada ka hor 7 fiidnimo habeenkii, waxana ay ka digeen cunsita cashada ee milayyada dambe ee habeenkii taasoo waxyeello u gaysan karta caafimaadka wadnaha in ka badan cunista cuntada ay ku jirto tirada badan ee cusbadu.
Kooxo ku takhasusay wadnaha oo Turkish ah ayaa waxa ay daraasad ku sameeyeen in ka badan 700 oo isku jira rag iyo dumar oo ka cabanaya cadaadiska dhiiga ee sarreeya si loo go’aamiyo saamaynta nidaamka cuntada iyo milayyada ay cuntada quutaan ee caafimaadkooda.
Xeel-dheerayashan ayaa waxa ay gaadheen in cunista cashada si joogta ah loo quuto xilliyada dambe ee habeenkii ay saameyn weyn ku leedahay heerka cadaadiska dhiigga ee habeenkii.
Waxaa xusid mudan in cunista cashada ee milayyada dambe ee habeenkii ay kordhiso soo saarka (stress hormones) hormoonada walbahaarka/welwelka sida (adrenaline).
« Shimon Peres dilaaga amray xasuuqii tuulada Qaana ee Lebenaan oo ku dhintay saaka barqadii hore Tel Aviv	» Waatan cuntooyinka faa’iidooyinka u leh caafimaadka wadnahaaga